U-Eddie Guerrero wayiphumelela nini iNtshatsheli yeWWE? - Wwe
U-Eddie Guerrero wayiphumelela nini iNtshatsheli yeWWE?
U-Eddie Guerrero ngomnye wabadlali abaphambili be-wrestling ukuba abambe imboni ye-wrestling ngubani ngelishwa, wasweleka ngo-2005 eneminyaka engama-38 ubudala. U-Eddie Guerrero kutshanje wabizwa ngokuba ngumdlali we-B + ngumsebenzisi we-Twitter kwi-tweet esele icinyiwe.
Le tweet ngo-Eddie Guerrero ibe sisihloko sengxoxo mva nje
Enzo kunye ne-cass eluhlaza
I-tweet ibangele isiphithiphithi kwimithombo yeendaba zentlalo, ekhokelela kubalandeli abaninzi kunye nabadlali be-wrestling bethumela u-Eddie Guerrero kwimidiya yoluntu.
U-Eddie Guerrero yi-GOAT. 🇲🇽️🇲🇽 pic.twitter.com/8MJNv1Uycb
-I-SANTOS ESCOBAR🇲🇽 (@EscobarWWE) Julayi 25, 2021
Ilifa likaEddie Guerrero linokugwetyelwa ngento yokuba uKurt Angle, imbasa yegolide yeOlimpiki kunye nembali yokulwa, uthatha uEddie njengomnye wabadlali abathathu abaphambili kuyo yonke imboni. Nantsi inqaku elivela ku-2017, elibona uKurt Angle ethetha ngobukhulu bukaEddie kwiNtetho yiJeriko podcast:
'Ingqondo-leyo. Ndiyathetha, u-Eddie Guerrero ngewayengoyena mntu ubalaseleyo ngalo lonke ixesha kuba xa ndalwa naye, wayesekwezintathu eziphezulu esasithetha ngazo, ke wayenako konke. U-Eddie Guerrero wayenomdla kakhulu, kodwa wayenabo bonke ubuchule. Wayengumlwi omkhulu kwaye wayifumana. Uye wagqiba. Wayeyazi indlela yokuzilungisa. ' (H / T: Inkcubeko )
Ngexesha lokubaleka kwakhe kwi-Wrestling yeWorld Championship, u-Eddie Guerrero wakwazi ukuphumelela i-WCW United States kunye ne-Cruiserweight Championship. Ukongeza, u-Eddie Guerrero wakhokela iqela elidumileyo leLatino ye-Order yeHlabathi ngexesha lokubaleka kwakhe kunyuselo lwangoku.
Kwinto eyayimalunga neminyaka esixhenxe yeWWE run eyalandela ukumka kwakhe kwi-WCW, uEddie Guerrero wafezekisa uninzi olungenakho kunyuselo olukhokelwe nguVince McMahon. Emva kokuphumelela i-United States, iQela leTek, i-Yurophu kunye ne-Intercontinental Championship, u-Eddie Guerrero wakwazi ukwaphula isilingi yeglasi kwaye waphumelela itayitile yokugqibela, i-WWE Championship.
xa engafuni ukutshata
U-Eddie Guerrero waphumelela i-WWE Championship yakhe yokuqala (kwaye kuphela) ngo-Februwari 15, 2004, xa woyisa intshatsheli u-Brock Lesnar ukugqiba i-No Way Out PPV.
U-Eddie Guerrero uza kubambelela kwisihloko kwiinyanga ezimbalwa ngaphambi kokuba alahlekelwe yi-JBL ngoJulayi 15, 2004 uhlelo lweSmackDown, ngoncedo lokuphazamiseka kukaKurt Angle.
Ukuphumelela kwe-WWE Championship yayingekokugqibela kukaEddie Guerrero, njengoko wayeqhubeka nokulawula isihloko seTag kunye noRey Mysterio. UGuerrero uza kujika isithende kungekudala kwi-Mysterio, eyakhokelela kumdlalo odumileyo we 'Custody of Dominik' e-SummerSlam ngo-2005.
Emva kokubulawa kwakhe kabuhlungu ngo-2005, uEddie Guerrero wanyuselwa kwiWWE Hall of Fame ngo-2006 nguChris Benoit, Rey Mysterio, kunye nomtshana wakhe uChavo Guerrero. URey Mysterio uza kuphumelela i-World Heavyweight Championship eWrestleMania 22, enikezela u-Eddie Guerrero.
ukuba wenzeni xa umyeni wakho ekhetha usapho lwakhe phezu kwakho
izinto ezili-10 eziphezulu onokuzenza xa ukruqukile ekhaya
kutheni ndikhetha ukuba ndedwa
bangaphi abantwana lil wayne
U-trey smith uya kuthanda unyana